"Mechie Mgbaaka Gị" Mgbasa ozi ọhụrụ Apple iji kwalite Apple Watch | Esi m mac
Apple etinyela aka na ahụ ike anyị ruo ọtụtụ afọ. Ọ na-egosipụta ya tumadi site na Apple Watch: the Modeldị egwuregwu, yana ụdị ọhụụ ọhụụ Nike +. Mana agbanyeghị ụdị Apple Watch ị nwere na nkwojiaka gị, ị ga-enwe ya oge niile ihe omume yiri mgbaaka.
Ọfọn, mgbaaka ndị a bụ kpakpando nke otu ọkwa Apple kachasị ọhụrụ. Companylọ ọrụ dị na mgbochi chọrọ ka ị kwaga: ọ chọghị ka ịnọdụ ala, ije ka mma, ịgba egwu, ịme ụdị egwuregwu ọ bụla na site na Usoro 2 ị nwere ike ịme egwuregwu mmiri.
Emechiela mkpọchi Mgbapụ gị ka Apple malitere, ugbu a naanị na ọwa YouTube, na-akwalite mmega ahụ na n'otu oge ahụ Apple Watch Series 2. Mgbasa ozi a na-adịru sekọnd 15, a na-atụkwa onyogho ngwa ngwa nke ndị na-emega ahụ na ụlọ siri ike. N'agbanyeghị oke ọsọ, ndị mmadụ na-apụta nwayọ nwayọ.
Ha na-egosi gị ihe atụ iji mejupụta mgbaaka dị iche iche, mbụ na-egwu egwu na frisbee. Ozugbo ọzọ onye ọzọ pụtara na-egwu mmiri, nke mere mgbaaka ọzọ juputara na n'ikpeazụ nna pụtara na ya na nwa ya nwoke na-egwuri egwu.
Na mmadụ pụtara igwu mmiri, a ga-atụ anya ya na mgbasa ozi Apple Watch, ebe ọ bụ otu n'ime mmemme anyị nwere ike ime na Usoro 2 na kama anyị enweghị ike iji Usoro 1.
Site na ọkwa a, Apple gbanwere ụkpụrụ. N'ihi na ndị ikpeazụ a na-aga usoro Go, nke kwuru banyere isiokwu ememme dị ka ịme oriri, "Gaa Na-agba"n'ime iji ụdị Nike + n'èzí n'èzí, "Go Dance" ijikwa egwu na nke kpatara impromptu agba egwu na n'ikpeazụ ọnọdụ dị iche iche n’oge anyị a, dị ka ụwa n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » "Mechie Mgbaaka Gị" mgbasa ozi Apple ọhụrụ iji kwalite Apple Watch
Apple mechie ndekọ nke "Planet of the Apps"